बुद्धिमान मानिसको ३ बानी ज्यादै खराब हुन्छ | Sindhuli Saugat
बुद्धिमान मानिसको ३ बानी ज्यादै खराब हुन्छ
मानिसका आनीबानी, स्वभाव र व्यवहार फरक फरक हुन्छन् । त्यसो त मानिसका आनीबानी एकअर्कामा नमिल्ने पनि होइन । मानिसका व्यवहार आनीबानीबाट उसका धेरै पक्षको बारेमा जानाकरी गर्न सकिन्छ । सबै आनीबानी एउटै भएका मानिस भेटाउन पनि मुस्किल हुन्छ भने सबै बानी फरक भएका मानिस भेटाउन पनि सायद सकस नै पर्दछ । जो कोही मानिसका हरेक पक्षहरु सही नहुन सक्छन् । केही न केही कमजोरी मानिसमा हुने नै गर्दछ भने सबै आनीबानी खराब मात्रै भएको मानिस पनि हुँदैन । तर खराब पक्ष भएपनि त्यसलाई सुधार्ने प्रयत्न भने गर्नुपर्छ ।
यसको अर्थ सबै बुद्धिमान व्यक्तिको स्वभाव यस्तै नै हुन्छ भन्नुभन्दा पनि अधिकांश बुद्धिमान मानिसको स्वभाव यस्तै हुन्छ । जुन बानीलाई खराब पनि मानिन्छ ।
३. भद्रगोल बसाईः इन्टेलिजेन्ट अर्थात् बुद्धिमान मानिसहरुको एक अर्को खराब बानी हुन्छ की बस्ने कोठा भद्रगोल बनाउनु । जब तपाइँ त्यस्ता मानिसहरुको कोठामा जानुहुन्छ तब उनीहरुको कोठा तपाइँलाइ कहिल्यैपनि सुव्यवस्थित तथा सफाचट लाग्दैन । सामानहरु छरिएका हुन्छन् । बुद्धिमान मानिसहरु आफ्ना सामानहरु मिलाएर राख्दै जान्दैनन् । शोधकर्ताहरुका अनुसार आफ्नो आसपास हुने छरिएका सामानहरुकै माध्यमबाट उनीहरुलाई केही फरक ढंगले सोँच्ने क्षमता पैदा भएको हुन्छ ।
पछिल्लाे - एकाएक रोकियो सत्तारुढ दल र फोरमको वार्ता ?
अघिल्लाे - बिवाहपछि महिलाको शरीर यस कारणले बदलिन्छ